Riwaayad Qaraaxo leh oo laga sameeyay Qoorqoor iyo Sheekh Shaakir. 'Xamar ha isku tegin' - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Sheekadii Guuxa Dadweynaha ee TV-ga Universal ayaa laga sameeyay sheeko ku saabsan khilaafka u dhaxeeya Madaxda maamulka Galmudug iyo kooxdaAhlu suna.
Sheekhadan oo ka mida Goosgoosyada Guuxa dadweynaha oo la baxday ‘Xamar Ha Isku Tagin’ ayaa laga sameeyay madaxweynaha Galmudug Axmed Qoorqoor iyo Madaxda Ahlu suna Sheekh Maxamed Shaakir, waxaana laga metalay Macalin Qori wata, Xaaskiisa iyo nin hore u furay oo ay isku heystaan.
Sheekada Macalinka hubeysan iyo Naagta uu furay ayaa ugu danbeyn heshiis lagu xalinayaa, waxaana macallinka uu dalbanayaa inuu dusha ka ilaaliyo Xaaska (Galmudug), iyadoo ninka dambe ee ay guursatay lagula talinayo inuusan joogista ‘Xamar’.
Previous articleXog cusub oo laga helay Ninka Soomaaliga ah ee Weerarka Mindida ku dilay Xildhibaanka Ingiriiska
Next articleQarax ka dhacay Saldhigga Booliska Beledweyne iyo Mas’uuliyiin Dhimasho iyo dhaawac ku noqday